I-Ouranosaurus - Iinkcukacha kunye nezibalo
I-Ouranosaurus (isiGrike esithi "i-lizard"); I-ore-ANN-oh-SORE-yethu
Amathafa asempuma Afrika
I-Middle Cretaceous (115-100 yezigidi zeminyaka edlulileyo)
Malunga nama-23 ubude ubude kunye neetoni ezine
Uluhlu lweentsiba ezisuka kwi-backbone; intsimbi
Emva kokuba uthathwa njengesihlobo esiseduze sase- Iguanodon , i-paleontologists sele ibeka i-Ouranosaurus njengoluhlobo lwe- hadrosaur (i-dinosaur ye-duck-billed).
Esi sityalo-sineemigca yeentsiba ezijikelezayo zivela emlonyeni wayo, eziye zavusa ukucatshulwa ukuba mhlawumbi zenze umdlalo wesikhumba, njengeSpinosaurus yangoku okanye i-pelycosaur yangaphambili i- Dimetrodon . Nangona kunjalo, ezinye i-paleontologists zigcina ukuba i-Ouranosaurus yayingenawo umkhumbi, kodwa i-pitmpedmp, ifana nekamela.
Ukuba i-Ouranosaurus yenza ngokwenene iphethe iinqanawa (okanye nakwi-hump) umbuzo onengqiqo kukuba, kutheni? Njengokuba kunjalo nezinye izityalo ezihamba ngeendlela ezihamba ngeendlela, isi sakhiwo sinokuthi siguquke njengesixhobo sokumisa ukushisa (sicinga ukuba i-Ouranosaurus inegazi elibandayo kunokuba i-metabolism enefuthe), kwaye mhlawumbi ibe yinto ekhethiweyo yokuziphatha ngokwesondo (okuthi, Ouranosaurus abesilisa abaneendlela ezinkulu zokuba bathathwe ngamabhinqa amaninzi). Ngakolunye uhlangothi, i-hump fatty, inokwakheka njengendawo ebalulekileyo yokutya kunye namanzi, umsebenzi ofana nawo osebenza kwiikamela zanamhlanje.
Isici esinye esaziwayo se-Ouranosaurus sisimo sale ntloko ye-dinosaur: kwakunokude ngokuqhelekileyo kunye nesicathakalo kwi-hadrosaur, kwaye ilahlekelwa nayiphi na i-ornamentation ye-dinosaurs (efana ne-crests of Parasaurolophus neCorythosaurus ). umgca omncinane phezu kwamehlo.
Njengamanye ama-hadrosaurs, iitani ezine ze-Ouranosaurus kungenzeka ukuba zikwazi ukubalekela kwizilwanyana ezimbini ezinyaweni, mhlawumbi ziza kuba ziphazamise ubomi babo naziphi na iipropops ezincinci okanye i-ornithopods kufuphi nendawo!
Izithombe zeTherizinosaur Dinosaur kunye neeprofayili
10 Iindaba malunga neLambeosaurus, i-Hatchet-Crested Dinosaur
10 Amanqaku Nge-Therizinosaurus, iLizard
Indlela yokuqulunqa ngeTori yakho ye-4x4 Pickup okanye i-SUV
Iikghono zoPhando lwabaFundi abaNgezelelweyo
Inombolo engqinelanayo ngesiTshayina
I-Kansas Wesleyan University Yamukelwa
IYunivesithi yaseTexas eDallas Admissions
Ii-Visas americanas ze-turista, i-trabajo y estudio solo para mexicanos
Iibhodi ze-Ouija zisebenza njani?
Isikhokelo kwiindlela ezininzi zokusebenzisa igama lesiSpeyin elithi "Según"
Umprofeti uYona - Ulahleka umlomo ngoThixo
Kuphi ukufumana i-Business School Internships Online
Uvavanyo lweSayensi yeZikolo eziPhakathi
IsiNgesi seMicrothelo - Imvume
Iingoma ezi-20 eziphezulu zeengoma malunga nokukhohlisa
Ukutshintsha izixhobo ezikuGitare kagesi
Indlela yokusebenzisa iiAnecdotes ukuze Ukhombise Inkulumo Yakho Elandelayo
Isivakalisi Isivakalisi seLwimi sinesiNgesi
Indlela yokusebenzisa iilwimi ezicacileyo ezimbini
Iingqungquthela zeConvection - Inkcazo kunye neMimiselo yeSayensi
Azange Abe Ngabaqambi: Ibali leMercury 13
Iingcaphuno ezingama-30 Kwiindumiso zaseIndiya